Wondershare-Nkesa na nkwusa na omume e
Distribution & Nkwusa
Ịkọrọ anyị-eto eto Ịga nke Ọma na ụlọ ọrụ
Wondershare Onye Mmekọ
Wondershare Ụtọ nkwusa na-ebipụta ma na-ere anyị na ngwaahịa na-enweghị emebe na-emepe emepe software site onwe ha. Anyị na-ama ihe ịga nke ọma ndibere na nkwusa na otutu mba site na àjà anyị nkwusa elu-edu na ngwaahịa, zuru customization, ọkachamara nkwado na ọbụna site na-eke ọhụrụ na ngwaahịa maka mpaghara ahịa.
Wondershare Reseller Mmemme enyere anyị resellers na-eme ka elu uru site na-ere Wondershare ngwaahịa na iji ha onwe ha ahịa ọwa na obodo ahịa. Anyị nwere mmasị na-ekesa anyị software site resellers lekwasịrị anya kpọmkwem mba ma ọ bụ mpaghara. N'ihi na anyị na-eche ọ bụla ahịa na ọ bụla azụmahịa na-achọ onye obibia, anyị kpebiri ka ịgbanwee n'ime onye mkparita uka kama n'ịtọgbọ ofu okwu. Sales mpịakọta na nkwa ime iji kwalite Wondershare bụ isi ihe na-ekpebi mmekọrịta. Wondershare Enye a sara mbara nke ohere maka nkesa mmekọ izute kpọmkwem ahịa mkpa nke ọ bụla ahịa.
Bụrụnụ ndị na-Onye Mmekọ
Anyị Onye Mmekọ
High-àgwà na ngwaahịa
Wondershare Nwere nnọọ ọkachamara na ahụmahụ na-emepe emepe ìgwè na anyị na ngwaahịa ndị nke kacha mma mma n'ụwa ahịa.
Publishers nwere ike na-ere anyị na ngwaahịa ma n'okpuru anyị ika ma ọ bụ ha onwe ha ụdị. Anyị nwere ike n'ụzọ zuru ezu hazie anyị na ngwaahịa kwa na anyị na-arịọ ndị nkwusa na-ebipụta ngwaahịa na ịzụlite ọhụrụ ngwaahịa na ọhụrụ ndịna-emeputa, asụsụ ọhụrụ na ọbụna ọhụrụ na ọrụ.
Low n'ùkwù ahịa
Wondershare Enye nnọọ keisompi n'ùkwù ahịa dabere na n'ùkwù ukwu na ahịa.
Mpi ikike ụgwọ
Wondershare Enye nnọọ keisompi ikike ụgwọ maka anyị nkwusa. The ikike ụgwọ ga-negotiated na kwetara na dabere na nke ukwu na ahịa.